Guall Guys horeyba waxay uga tirsan yihiin Ciyaaraha Epic markay iibsanayaan istudiyahooda | Androidsis
Ciyaaraha Epic waxay ku dhawaaqeen dhowr saacadood kahor iibsashada Kooxda Ciyaaraha Tonic, shirkadda waalidka ee istuudiyaha Mediatonic, abuuraha Fall Guys; ciyaartaas khadka tooska ah ee bisadda galisay biyaha xagaagii la soo dhaafay iyadoo daraasiin YouTubers ah uu qarax ka dhacay.
Sida la sheegay Tim Sweeny, oo ah Maamulaha guud ee Ciyaaraha Epic, maahan wax qarsoodi ah in ay abuurayaan meertada Ciyaaraha Tonic-na waxay wadaagaan isla ujeeddada iyo himilada. Daraasad u gudubta gacanta milkiilayaasha Fortnite iyo ciyaaro kale, iyo in dhawaanahan ay si toos ah u arkayaan iyaga iyo Apple.
Sweeny wuxuu ku andacoonayaa taas darteed abuurista mustaqbalkan dalban, waxay u baahan yihiin karti tayo sare leh oo dhexdooda ah oo yaqaan sida loo dhiso ciyaaro awood badan, nuxur, iyo waaya-aragnimo.
WAR CULUS!@Mediatonic ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo inaan ku soo biirnay @Soomaalikabe reerka!
Waa maxay tan macnaheedu? Waan ku faraxsanahay inaad i weydiisay!
- Guall Guys 4041? SOON (@Goobjoognews) March 2, 2021
Dave Bailey, Agaasimaha Guud ee Kooxda Tonic Games Group, ayaa bayaan uu ku adkeysanayaa in sida ay yiraahdaan, qof walba u qalmaa ciyaar umuuqata in iyaga loo sameeyay. Iyo Epic, laga soo bilaabo ereyadii Bailey, waxay umuuqataa inay leeyihiin gurigii loogu talagalay.
Erayada qaar ka mid ah muhiimad u yeelo bayaanada soo socda ee iibka ee Epic Games of Tonic Games Group, waxaa naga haray in mustaqbalka Guys Gull uusan hakad galin doonin iibsiga. Iyo inay sii wadi doonto inay kuwada ciyaarto labada PC iyo Playstation ugu horeyntii Nintendo Switch iyo Xbox.
Dhab ahaantii Faallooyinka Mediatonic ee ku saabsan baloogga in warka laftiisu u yahay guul weyn Gu'gii Gu'ga; sidaa darteed qeybta na taabata, waxaan rajeyneynaa inaysan waqti dheer ku qaadan doonin nooca Android. Taasina waa tan iyo xagaagii hore istuudiyaha wuxuu ka koray 35 horumariye in ka badan 150. Oo weliba sidaas oo ay tahay weli waxaa jira waxyaabo badan oo lagu sameeyo Fall Guys; halka aan ciyaari doonno ciyaaro kale oo la mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Ciyaaraha Epic waxay iibsadaan Mediatonic, istudiyaha abuuray Fall Guys